एकदमै पातलो दुब्लो साथै कमजोर महसुस गर्नुहुन्छ ? यो चिज खानुहोस् ५ दिनमै देख्नुहुनेछ यसको चमत्कार – NepalajaMedia
March 31, 2021 8068
कसरी खाने ? हरेक दिन दुधमा साबुदाना मज्जाले पकाएर खीर बनाएर खाने गर्नुहोस्। यसले शरीरमा उर्जा प्रदान गर्नुका साथै जस्तोसुकै पातलो मान्छे पनि बलियो, मोटो र मजबुत हुन्छ। त्यस्तै दोस्रो चीज हो आलु।यसको लागि ३ ओटा ठुलो ठुलो आलु उमाल्ने। हरेक दिन यसरी उमालेको आलु खानुहोस्। आलुमा भरपुर मात्रामा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ जसले पातलो वा दुब्लो व्यक्तिलाई फुर्तिलो र स्फुर्त बनाई शरीरको तौल बढाउँछ।
Prevअघिल्लो दिन काखैमा राखेर ‘बुढा अब विदेश नजाउ’ भन्थि, भोलीपल्टै यस्तो खबर सुन्नुपर्यो भन्दै श्रीमान धरधरी रोए (भिडियो हेर्नुस्)
Nextबुढेसकालमा विदेशवाट घर फर्कदा श्रीमती छैनन् : दुखमा साथ दिएकी थियौ, पोइला गएकै भएपनि फर्केर आउ स्वीकार गर्छु, अब हाम्रो सुखका दिन आए’ (भिडियो हेर्नुस्)